Nhau dzeBhaibheri: Mambo Akanaka Wokugumisira waIsraeri - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Josia anongova namakore masere bedzi apo anova mambo wendudzi 2 dzokuzasi dzaIsraeri. Izera duku kwazvo rokuti munhu ave mambo. Nokudaro pakutanga vakuru vanomubetsera kubata ushe rudzirwo.
Josia ava mambo kwamakore manomwe anovamba kutsvaka Jehovha. Anotevera muenzaniso wamadzimambo akanaka saDhavhidhi, Jehoshafati naHezekia. Ipapo, achingunoveri pwere, Josia anoita chinhu choushingi.
Kwenguva refu uzhinji hwavaIsraeri hwave hwakaipa kwazvo. Vanonamata vamwari venhema. Vanokotamira zvidhori. Saka Josia anobuda navarume vake ndokuvamba kubvisa namato yenhema munyikayo, lri ibasa guru nokuti vanhu vazhinji kwazvo vanonamata vamwari venhema. Ungaona Josia navarume vake pano vachiputsa zvidhori.
Pashure pacho, Josia anoisa varume vatatu mukutarisira kugadziridzwa kwetembere yaJehovha. Mari inounganidzwa kubva kuvanhu ichipiwa kuna ava varume kuripira basa rinofanira kuitwa. Vachingunoshanda patembere, muprista mukuru Hirkia anowana chimwe chinhu chinokosha kwazvo imomo. Ibhuku rimene romutemo iro Jehovha akaita kuti Mosesi anyore kare kare. Rakanga rarasika kwamakore mazhinji.
Bhuku rinoendeswa kuna Josia, uye anokumbira kuti rimuravirwe. Zvaanoterera, Josia angaona kuti vanhu vave vasingachengeti mutemo waJehovha. Anosuruvara kwazvo pamsoro pakwo, nokudaro anobvarura nguvo dzake, sezvaungaona pano. Anoti: 'Jehovha atitsamwira, nokuti madzibaba edu haana kuchengeta mitemo yakanyorwa mubhuku iri.
Josia anoraira muprista mukuru Hirkia kuti agowana kuti Jehovha achaitei navo. Hirkia anoenda kumukadzi Hardha, ari muprofitakadzi, ndokumubvunza. Anomupa iri shoko rabva kuna Jehovha rokuenda naro kuna Josia: 'Jerusarema navanhu vose richarangwa nokuti vakanamata vamwari venhema uye nyika yakazadzwa noushati. Asi sokuti iwe, Josia, waita chiri chakanaka, chirango ichi hachizouyi kusvikira pashure porufu rwako.'
2 Makoronike 34;1-28.
Mambo Josia ane makore mangani paanova mambo, uye kwemakore manomwe anotanga kuitei paanenge ava mambo?
Uri kuona Josia achiitei mumufananidzo wokutanga?
Muprista mukuru anowanei varume pavari kugadziridza temberi?
Nei Josia achibvarura nguo dzake?
Muprofitakadzi Hardha anopa Josia shoko rokuti chii rinobva kuna Jehovha?
Verenga 2 Makoronike 34:1-28.
Josia anopa muenzaniso upi kune vaya vaifanira kutsungirira nguva youduku yakaoma? (2 Mak. 33:21-25; 34:1, 2; Pis. 27:10)
Josia anotora matanho api makuru kuti afambisire mberi kunamata kwechokwadi mugore rechi8, rechi12, uye rechi18 rokutonga kwake? (2 Mak. 34:3, 8)
Tinogona kudzidzei mukutarisira nzvimbo dzedu dzokunamatira mumienzaniso yakaitwa naMambo Josia uye Muprista Mukuru Hirkia? (2 Mak. 34:9-13; Zvir. 11:14; 1 VaK. 10:31)